Vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza kushandisa machena machena nekuda kwechitarisiko chayo chakanaka uye akawanda akanaka maficha.
Chekutanga, kuomarara kwakanyanya. Hazvisi nyore kushanduka. Natural marble ndeyekupfuura makore marefu kuti igadzire zvakasikwa. Saka zvakasikwa zvakaenzana muchimiro chayo. Uye iyo mitsara yekuwedzera yekuwedzera iri shoma kwazvo, ingangoita kusagadzikana kwemukati. Saka kuomarara kwayo kwakanyanya kwazvo, mukushandiswa kwemaitiro hakuzo deformation.
Chechipiri, inopesana nekuora uye acid. Natural marble iro rakarongeka sangano rakaenzana, saka hazvisi nyore kutambura nekukanganiswa kweasidhi base mvura. Kana kushandiswa zvakare kusingadi kuvimba nebesmear yekuvandudza bonde rakatsetseka, chengetedza kusimuka zvakapusa uye nyore.
Chechitatu, yakasimba kupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kupisa. Nekuti kuoma kwemabhura zvinhu kwakakwirira, uye kuomarara kwakanaka kwazvo, saka kupfeka kwayo kuramba kwakasimba zvakare. Kwete izvozvo chete, kupisa kwayo kwepamusoro kupisa zvakare kwakanaka kwazvo. Izvo hazvizove tembiricha shanduko uye deformation. Kumba tembiricha yemukati inogona kuchengetedza ayo epakutanga masimba epanyama.Saka hupenyu hwebasa hwakareba.
Chechina, kugadzikana kwemuviri zvimiro. Maumbirwo emarble echinyakare akangwarira uye akaenzana. Kunyangwe mune yekunze kukanganisa, haizo burr, pamusoro kunyatso kukanganiswa.Nekuti zvinhu zvacho zvakagadzikana mumuviri, zvinogona kuvimbisa hapana deformation mushure mekushandisa kwenguva refu uye anti-ngura, antimagnetic, kuputira.
Chechishanu, hapana magnetization. Natural marble zvinhu zvisinei kuti yakareba zvakadii mushure mekushandisa hazvizoonekwe semagineti, inogona kufamba mushe.Uye haina kukanganiswa nehunyoro.
Nekuda kwezvakanaka izvi, macomputer emarble anoshandiswa zvakanyanya uye zvakanyanya kuwanda, uye dhizaini iri zvakare yakasarudzika.Kuwedzera kune akapusa emarble countertops, inogona zvakare kusanganiswa nezvimwe zvinhu, kudhumhana kubva kune yakasarudzika aesthetic.